Somaliland: Xukuumadda Siilaanyo Oo La Daalo Dhacaysa Hadal Ka Soo Yeedhay Musharaxa Xisbiga Waddai - Wargane News
Home English News Somaliland: Xukuumadda Siilaanyo Oo La Daalo Dhacaysa Hadal Ka Soo Yeedhay Musharaxa...
Somaliland: Xukuumadda Siilaanyo Oo La Daalo Dhacaysa Hadal Ka Soo Yeedhay Musharaxa Xisbiga Waddai
Madaxtooyada Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa su’aal gelisay balanqaad uu Murrashax Cabdiraxmaan Cirro u sameeyay ciidammada dalka oo uu sheegay inuu mushaharka u kordhin doono Boqolkiiba laba Boqol, askari kastana u dhisi doono guri, haddii uu ku guulaysto doorashada madaxtooyada ee fooda innagu soo haysa.
Afhayeenka madaxtooyada Eng. Xuseen Aadan Cigge (Dayr), ayaa ku dooday in Guddoomiye Cirro looga baahan yahay inuu faahfaahiyo halka ay ka imanayso lacagtaas xad-dhaafka ah ee uu balan-qaaday; “Deroojinkii ciidammada kala duwan ayaannu bixinay haddaanu nahay xukuumadda Kulmiye, mushaharkiinna waa loo kordhiyay daryeelkoodana kor baa loo qaaday. guryo loo dhiso iyo in ay af uun noqoto maahee waa in ficil iyo wax ummadda loo soo bandhigo ay noqoto balanqaadka guddoomiye Cirro oo yidhi boqolkiiba laba boqol iyo konton (250%) ayaan u kordhin doonaa mushaharka ciidammada.
Su’aasha la is weydiinayaa waa xaggee ayuu ka keenayaa lacagtan uu u kordhinayo ciidammada. dakhliga Somaliland waa la yaqaanaa meelaha uu ka soo baxo. Ma cashuurta ayuu dadka ku kordhinayaa? Ma lacag kaloo meel kale innooga imanaysaa? waa inuu u sharraxo halka uu ka keenayo, annaguna kama soo horjeedno in ciidammada lacagta loo kordhiyo, ciidamaduna waa kuwa dalka nabadgelyadiisu ku dhisan tahay ee ilaaliya,”ayuu yidhi Xuseen Dayr oo u waramay warbaahinta shalay.
Waxa kaloo uu caddeeyay inay Somaliland dhulkeeda ka difaaci doonto cid kasta oo ku soo xadgudubta soohdimaheeda mucayinka ah. Waxaannu si kulul uga jawaabay Wasiirka Daakhiliga Puntland, Cabdi Cali Xirsi (Qarjab) oo sheegay inaan wax sanaaduuq doorasho ah la geyn karin Sool iyo Sanaag; “Maamul gobeleedka Puntland ee Soomaaliya waxay farogelin aan geedna loogu soo gaban ku hayaan goballada Sool iyo Sanaag, waa Somaliland mana aha Putland. Somaliland awood ayay u leedahahay in xuduudaheeda sugto waxaannu leenahay ciidan qaran oo difaaci kara dalka, kana difaaci kara cid kasta oo nagu soo xadgudubta. mowqifka xukuumadda Somaliland waxa weeye in dariskeeda kula noolaato nabadgalyo iyo deganaansho,laakiin u dulqaadan mayno cidda soo farogelisa xuduudahayaga ciddii nagu soo xadgudubtana waanu iska difaaci doonaa.”
Afhayeenku wuxuu intaas ku daray in xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI ay iska lumiyeen fursad ay ku hambalyeyn lahaayeen guddoomiyaha cusub ee wakiillada Baashe Maxamed Faarax oo 6-dii bishan ka guulaystay murrashax Cabdiraxmaan Talyanle oo kula tartamay xilkaas waxaannu yidhi; “Xisbiga mucaaradka ah ee WADDANI waxay u ahayd fursad siyaasiya in ay hambalyeeyaan guddoomiyaha golaha wakiillada oo ay yidhaahdaan danta qaranka ayaannu u tanaasulnay, taasina may dhicin, markaa way lumiyeen fursadaa siyaasiga ah.”
Waxa kaloo sheegay in Somaliland ka bixi doonto nidaamka dadku ay qabiil ku kala doortaan axsaabta siyaasadda ee tartamaysa, waxaannu yidhi; “Marka aad qabiil wax ku raacdo, lama xisaabtami kartid ciddii aad dooratay. laakiin markaad ku raacdo fikir siyaasiya iyo barnaamijka uu ummadda u soo bandhigayo waad la xisaabtami kartaa, waxaanan rajaynayaa in ummaddeenu ka gudbi doonto nidaamka reernimada ah.”